Ada Ekspresi Tren Seferleri7Aralık’ta Artacak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ဒီဇင်ဘာလတွင်တိုးမြှင့်မည့် Island Express ရထားအစီအစဉ်ဇယား 7
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 41 Kocaeli, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
မေလတွင်2စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သောတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် TCDD ပေးသည့်နေ့ဖြစ်သော7ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းတွင်ရထားဝန်ဆောင်မှုများထပ်မံတိုးချဲ့မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Kocaeli ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသတင်းစာOguzhan Aktas မှသတင်းများအရ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားမထွက်ခွာမီ Ada, Adapazarı-Haydarpaşaကျွန်း Express သို့ပျံသန်း, အရှိန်မြန်နှုန်းရထားအလုပ်ယခင်မြို့ပြအစေခံကျွန်များနှင့်ကျောင်းသားများကအသုံးပြုတဲ့ဒေသဆိုင်ရာရထားတစ်မျိုးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသောဒေသတွင်းရထားတစ်မျိုးအတွက်ခရီးသည်အရေအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်းကျဆင်းသွားပြီးနောက်ကျွန်း Express ကိုမှပျံသန်းသည်။ ပြီးခဲ့သည့်မေလက 10 မှနေ့စဉ်တစ်ဖန်ထွက်ခွာသောဤရထားလမ်းသည်Köseköyမှတ်တိုင်ဖျက်သိမ်းပြီး Derbent ဘူတာရုံကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက်တွင် 8 သို့ပျံသန်းမှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ဤလိုင်းတွင်တစ်နေ့လျှင် 12 ခရီးသည်တစ်သောင်းကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး 12 ခရီးစဉ်အားလုံးမှာ 24 ထွက်ခွာခြင်းနှင့် YHT မတိုင်မီ 30 ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ဤလိုင်းပေါ်ရှိတစ်လလျှင် 30 တစ်ထောင်ခရီးသည်ပို့ဆောင်သည်။ Derbent မှတ်တိုင်ကိုယခုလကုန်တွင်ဖွင့်ရန်စီစဉ်ထားပြီးKöseköy-Pamukova လိုင်းရှိအချက်ပြလုပ်ငန်းများသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်သာပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်တွင်အပြီးသတ်ခြင်းများနှင့်အတူလေယာဉ်ခရီးစဉ်အရေအတွက်ကို7သို့တိုးချဲ့ပြီးထပ်မံမှတ်တိုင်များတိုးလာသည်နှင့်အတူတိုးလာပါလိမ့်မည်။
Eskişehir Express, Capital ကို Express, သမ္မတနိုင်ငံ Express, Sakarya Express ကိုရထားနဲ့ကြိမ် 02 / 09 / 2012 ESKİŞEHİR EXPRESS၊ BAŞKENT EXPRESS, REPUBLIC OF REPUBLIC, SAKARYA EXPRESS, ရထားများဟာရာဒရာ - အက်စ်ရှီရှီးရီးယား - ဟိုင်ဒါပါရှာအကြားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရထားစီးသည်။ ၎င်းတို့သည် Ankara - Eskişehir - Ankara အကြားရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ …
ကားအရေအတွက် Orient Express ကိုရထားကိုတိုးပွါးစေ 27 / 12 / 2017 အရှေ့ Express မှလေ့လာရေးခရီးများကကြေငြာခဲ့သောHabertürk'nun 'Like Express' ခေါင်းစဉ်သည် Kars မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မြို့တော်ဝန် Murtaza Karaçantaကပြောကြားသည်မှာသတင်းနှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်သည်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာသည်။ ၀ ယ်လိုအားတိုးလာသည်နှင့်အမျှလှည်းအရေအတွက်တိုးလာလိမ့်မည်”
orient Express ကိုလေယာဉ်နံပါတ် MI, MI Decrease မှတိုးမြှင်? 27 / 05 / 2019 Kars တွင်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသည့် Eastern Express လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအရေအတွက်သည်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းတိုးလာသလားသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားသလား။ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Arikan နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုတစ်ခုကပြောကြားခဲ့သည်။ Arıkan, ene အလွန်စိတ် ၀ င်စားသောမျက်နှာရထားနှင့်ရထား…
Mithatpaşa-Pendik အကြား, အစ္စတန်ဘူလ် Express ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင် 17 / 02 / 2017 Mithatpaşa-Pendik, Island Express ပျံသန်းမှုများစတင်သည်။ TCDD Taşımacılık A.Ş. Mithatpaşa-Pendik ကျွန်း Express ကိုလေ့လာရေးခရီး 1 RAပြီရထားများကပြည်နယ်၏အစီအစဉ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်ဟုကြေငြာထားသောရထား၏လိုအပ်ချက်အပေါ်တွင်စတင်လေ့လာရေးသည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
2020 ၌အသစ်သော YHT သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် YHT လေ့လာရေးခရီးများ 10 / 10 / 2019 TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran Yazıcıသည်CDşနယ်ပယ်အတွင်းရှိဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်KuDadasıတွင်ကျင်းပသည့်gerçekleştirilgerçekleştiril။ ဤနေရာတွင်တက်ရောက်လာသူများကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်Yazıcıကပြောကြားခဲ့သည်
ကားအရေအတွက် Orient Express ကိုရထားကိုတိုးပွါးစေ
orient Express ကိုလေယာဉ်နံပါတ် MI, MI Decrease မှတိုးမြှင်?
Mithatpaşa-Pendik အကြား, အစ္စတန်ဘူလ် Express ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်
Adapazari - အစ္စတန်ဘူလ် (Pendik) ကျွန်း Express ကိုရထား Times သတင်းစာ 2019
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစစ်ဆေးမှုပင်လယ်ပြင် Moving အဆင့်အားဖြင့်Yalnızçamနှင်းလျှောစီး Resorts အဆင့်